News18 Nepal || श्रावणमा हरियो रंग लगाउनुको के छ कारण ? यस्तो छ महत्व - News18 Nepal
काठमाडौं । श्रावण महिनालाई भगवान शिवको महिनाका रुपमा मानिदै आइएको छ । यो महिनामा नदी वा तलाउको पवित्र जल शिवलाई अर्पण गरेमा शिवको असिम कृपा प्राप्त हुने धार्मीक मान्यता रहदै आएको छ । यस महिनामा हिन्दु धर्मालम्बीहरु इच्छाइएको शिवालयमा गई शिवलाई जल अर्पण गर्ने परम्परा छ । यस क्रममा शिवलाई प्रसन्न पार्न बोलबम जाने । हरियो वा गेरु रंग धारण गर्ने परम्परा छ ।
पछिल्लो एक दशक यता श्रावणमा हरियो रंग लगाउने चलन बढेको छ । श्रावणमा महिलाले हरियो रंगको सारी लगाउने, चुरा, पोते लगाउने चलन बसेको छ । आखिर श्रावणमा हरियो रंग लगाउनुको कारण के छ त ? श्रावणमा विवाहित महिलाले हरियो रंगको चुरा, पोते, सारी वा हरियो रंग धारण गर्दा परिवारमा खुसी बढ्ने तथा श्रीमानको भविष्यमा राम्रो प्रभाव पर्ने मान्यता छ ।
यस अलावा रातो रंग धारण गर्दा खुशी र सौभाग्य बढ्ने विश्वास गरिन्छ । बुध ग्रहको प्रभाव व्यक्तिको भवष्यि र व्यवसायमा सीधा रहने गर्दछ । यस रंगलाई शरीरमा धारण गर्दा मनुष्य आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुने विश्वास गरिन्छ । हिन्दु मान्यता र ज्योतिषशास्त्र अनुसार हरियो रंगलाई बुध ग्रहको प्रतीक मानिन्छ । तसर्थ हरियो रंग धारण गर्दा बुध बलियो हुने विश्वास छ ।
बुध बलियो हुदाँ मानिसले सन्तान सुख प्राप्त गर्ने तथा बुद्धि र समृद्धिलाई बढावा दिने मान्यता छ । भगवान् शिवलाई प्रसन्न पार्न र शिव कृपा पाउन पनि हरियो रंग धारण गर्ने चलन रहेको छ । शिव आफैमा योगी भएकाले हरियो प्रकृति र यसको रंगले शिवलाई चाडैं प्रसन्न पार्ने विश्वास छ । तर्सथ महिलाहरू श्रावणमा हरियो मेहन्दी, चुरा, पोते र सारी लगाउने गर्दछन् ।